Ndị agha ụgbọelu ala Naịjirịa ga-ewube isi ụlọ ọrụ na Steeti Katsina
Ụlọ Ọrụ na-ahụ maka Ntụliaka, INEC, Etinyela Mkpụrụ Ụbọchị Iri Abụọ na Atọ nke Ọnwa March maka Mmegharị na Mmezu Ntụliaka na Steeti Isii...
Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission nọrọ na ụbọchị Tuzdee tinye abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa March maka mmegharị na mmezu ntụliaka na steeti isii ahụ ebe enweghị ike chịkọta ntụliaka nke gọvanọ n'ụbọchị iteghete nke ọnwa March.
Ndị agha ụgbọelu ala Naịjirịa ekwuola na ha ga-ewube isi ụlọ ọrụ ha na Steeti Katsina, iji buo agha megide ịhe ịche aka mgba nke ọrụ nchekwa na mpaghara North East nke mgbago ugwu ala Naịjirịa.
Onye isi ndị agha ụgbọelu ala Naịjirịa, bụ Air Marshall Sadiq Abubakar, mere ka nke a pụta ịhe oge ọ gbapere egwuregwu ndị agha ụgbọelu agba nke asatọ ya na Steeti Katsina.
A ga-ewube isi ụlọ ọrụ ndị agha ahụ na Katsina nakwa Daura, ebe ha nwetagoro obosara ala maka ya bụ ọrụ n’obodo abụọ ahụ.
Nke a ga-enyere ndị agha ahụ aka ibu agha megide iyi egwu, ori ehi nakwa arụ ndị ọzọ na mpaghara ahụ.
Ndị agha ụgbọelu ahụ nọkwa kemgbe na-ebuso agha iyi egwu nakwa ori mmanụ akụchinere agha na mpaghara North East nakwa South South nke ala Naịjirịa.
O jikwazị ụgbọelu nshịkọ na-ebuso ori mmanụ akuchinyere agha na ndịda ala Naịjirịa agha.
Air Marshal Abubakar, kọwara na ọrụ ha na-arụ emela ka ndị ntorobia wepu aka n’ịhe n’ezighị ezi, dịka ha matagoro na ịhe ndị ahụ abụghị ịhe dị mma.
Ndị agha ụgbọelu ala Naịjirịa ebunyela isi ụlọ ọrụ ha niile akarangwa E ji-eme egwuregwu dị ịche ịche iji mee ka ha gbasie ike nakwa ka ụbụrụ ha na-anụ ọkụ, iji hu na ha na-arụ ọrụ ha nke ọma.
Ndị ga-esonye n’ egwuregwu a bụ ndi si isi ụlọ ọrụ ise, ebe ha ga-asọ mpi n’egwuregwu dị iri na atọ.
Ụlọ Nnọchiteanya nke Iteghete: APC nwere mmadụ Narị abụọ na iti na otu, PDP nwere otu narị na iri na otu...
Okwe ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party nwetara mmeri n'oche dị otu narị na iri na otu n'ụlọ nnọchiteanya nke ala anyị, ebe ọ ka n'ọnụ ọgụgụ narị abụọ na iri na otu bụ nke ndị All Progressive Congress.
Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa Niile...
Ụbọchị Ụmụ Nwanyị n'ụwa Niile, bụ ụbọchị asatọ n'ọnwa atọ nke afọ ọ bụla, bụ ụbọchị zuru ụwa niile ọnụ iji were kwadoo ma kwanyere ụmụ nwaanyị ugwu pụrụ iche n'ike ha na-akpa na obodo, ebe ọnọdụ akụ na ụba dị, ọdịnala na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị. Ụbọchị a ka ejikwa eme ka ịkpa oke na mmekpa ahụ a na-emekpa ụmụ nwaanyị belata.